Amaxwebhu afunyenwe yi-US Right to Know kunye neminye imithombo kukhanyisa ukusebenza kwangaphakathi kwe IBhunga leLizwe loLwazi lokutya (IFIC), iqela lezorhwebo elixhaswe ngemali ziinkampani ezinkulu zokutya kunye nezolimo, kunye nengalo yayo engenzi nzuzo "ingalo yemfundo yoluntu" Isiseko se-IFIC. Amaqela e-IFIC aqhuba iinkqubo zophando kunye noqeqesho, ukuvelisa izixhobo zokuthengisa kunye nokulungelelanisa amanye amaqela oshishino ukunxibelelana nomzi-mveliso malunga nokhuselo lokutya kunye nesondlo. Imiyalezo ibandakanya ukukhuthaza nokukhusela iswekile, ukutya okwenziweyo, iiswiti ezingezizo, izongezo zokutya, amayeza okubulala izitshabalalisi kunye nokutya okwenziwe ngemfuza.
Ukutshiza ingxelo yomhlaza wezibulali zinambuzane eMonsanto
Njengomzekelo omnye wendlela amaqabane e-IFIC kunye neenkampani zokukhuthaza iimveliso ze-agrichemical kunye nokuphambukisa iinkxalabo zomhlaza, oku uxwebhu lwangaphakathi lweMonsanto ichonga i-IFIC njenge "Iqabane lomzi mveliso" kwisicwangciso sobudlelwane phakathi kukaMonsanto Ukujongela phantsi iqela lophando lomhlaza le-World Health Organisation, i-Arhente yaMazwe ngaMazwe yoPhando ngomhlaza (IARC), "ukukhusela igama" leRoundup weedkiller. Ngo-Matshi 2015, i-IARC yagweba i-glyphosate, eyona nto iphambili kwi-Roundup, ukuba ibe yiyo mhlawumbi i-carcinogenic ebantwini.
I-Monsanto idwelise i-IFIC njengeNqanaba 3 "iqabane loshishino" kunye namanye amaqela amabini afumana inkxaso-mali kwishishini lokutya, i Umbutho wabavelisi bokutya kwaye i Iziko lokuDibana kokutya.
IFICIC izama njani ukunxibelelana nomyalezo wayo kubafazi.
Amaqela achongwe njengenxalenye ye "Iqela lokuzibandakanya kwabachaphazelekayo" elinokwazisa iinkampani zokutya "ngesicwangciso-qhinga sokugonyelwa" seMonsanto kwingxelo yomhlaza we-glyphosate.
Iiblogi kamva zithunyelwe kwi- IFIC iwebhusayithi bonisa indlela iqela elixhasa ngayo "ungakhathazeki, sithembe" imiyalezo kubasetyhini. Amangenelo abandakanya, "iindlela ezi-8 eziphambeneyo abazama ukoyikisa ngazo iziqhamo kunye nemifuno," "Ukusika i-clutter kwi-glyphosate," kwaye "Phambi kokuba siphume ingqondo, masibuze iingcali… iingcali zokwenyani."
IFIC ichithe ngaphezulu kwe- $ 22 yezigidi kwisithuba seminyaka emihlanu ukusuka 2013-2017, ngelixa i-IFIC Foundation ichithe ngaphezulu kwe- $ 5 yezigidi ngaloo minyaka mihlanu, ngokweefom zerhafu ezifayilishwe kwi-IRS. Imibutho kunye namaqela oshishino axhasa i-IFIC, ngokwe ukubhengezwa koluntu, zibandakanya iAmerican Beverage Association, American Meat Science Association, Archer Daniels Midland Inkampani, Bayer CropScience, Cargill, Coca-Cola, Dannon, DowDuPont, General Mills, Hershey, Kellogg, Mars, Nestle, Perdue Farms kunye nePepsiCo.
Uyilo lweerekhodi zerhafu ze-IFIC Foundation, ezifunyenwe ngezicelo zeerekhodi zikarhulumente, zidwelise iinkampani ezixhase iqela 2011, 2013 okanye zombini: Umbutho wabavelisi bokutya, iCoca-Cola, iConAgra, iGeneral Mills, iKellogg, iKraft Foods, iHershey, iMars, iNestle, iPepsiCo kunye ne-Unilever. ISebe lezoLimo laseMelika linike iSiseko se-IFIC i-177,480 yeedola kwi 2013 ukuvelisa "Isikhokelo somnxibelelanisi”Yokukhuthaza ukutya okwenziwe ngemfuza.
I-IFIC iphinda icele imali kwimibutho ethile kwimikhankaso ethile yokukhusela imveliso. Le Aprili 28, 2014 imeyile Ukusuka kwisigqeba se-IFIC ukuya kuluhlu olude lwamalungu ebhodi yequmrhu licela imali engama- $ 10,000 yokuhlaziya "Ukuqonda ukutya kwethu" nyathelo ukuphucula izimvo zabathengi zokutya okusetyenzisiweyo. Amanqaku e-imeyile abaxhasi bezemali bangaphambili: iBayer, iCoca-Cola, iDow, iKraft, iMars, iMcDonalds, iMonsanto, iNestle, iPepsiCo kunye neDuPont.
Ukukhuthaza ii-GMO kubantwana besikolo
IFIC ilungelelaniswe Amaqela e-130 nge Umdibaniso wokondla ikamva kwimizamo yemiyalezo "yokuphucula ukuqonda" malunga nokutya okuyimfuza. Amalungu afaka Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, i IBhunga loLawulo lweCalori, le Iziko lokuDibana kokutya kunye noLondolozo lweNdalo.
I-Alliance to Feed the future ibonelela ngeekharityhulam zemfundo zasimahla zokufundisa abafundi ukuba bakhuthaze ukutya okwenziwe ngemfuza, kubandakanya "Inzululwazi yokondla umhlaba”Yootitshala be-K-8 kunyeUkuzisa iBiotechnology kuBomi”Kumabanga 7-10.
Ukusebenza kwangaphakathi kweenkonzo ze-IFIC ze-PR
Uthotho lwamaxwebhu ifunyenwe yi-US Right to Know bonelela ngengqondo yendlela i-IFIC esebenza ngayo emfihlekweni ukujikeleza iindaba ezimbi kunye nokukhusela iimveliso zabaxhasi bayo.
Idibanisa iintatheli kwizenzululwazi ezixhaswa ngemali
Ngomhla we-5 ka-Meyi ka-2014 Ukusuka kuMat Raymond, umlawuli omkhulu wezonxibelelwano, wazisa ubunkokheli be-IFIC kunye "neqela leengxoxo zosasazo" "kumabali aphakamileyo apho i-IFIC ibandakanyeka khona ngoku" ukunceda ukuhambisa iindaba ezimbi, kubandakanya ukuphendula kumdlalo bhanyabhanya weFed Up. Uye waphawula ukuba baxhume intatheli ye New York Times no “Dr. UJohn Sievenpiper, ingcali yethu eyaziwayo kwicandelo leswekile. ” USievenpiper “uphakathi kweqela elincinane lezazinzulu zemfundo zaseKhanada eziye zafumana amakhulu-khulu enkxaso-mali evela kubenzi beziselo ezinxilisayo, kwimibutho yorhwebo yokutya okuhlanganisiweyo nakwimizi-mveliso yeswekile, ukufumanisa izifundo kunye namanqaku oluvo ahlala engqinelana nemidla yamashishini, ” ngokweNational Post.
NgoFebhuwari 27, 2013, Abasebenzi be-IFIC bafuna uhlalutyo kuJames Hill ukujongana nephepha elibhalwe ngokubhaliweyo nguGqirha Robert Lustig ukudibanisa iswekile kunye neswekile. U-Hill wayengumlawuli we-Global Energy Balance Network, iqela elingaphambili Ixhaswe ngemali nguCoca-Cola Ukutshintsha ingxoxo malunga nokukhuluphala kude neenkxalabo zeswekile. Ezo zityhilelo zenze i-GEBN ukuba disband ngo-2015.
Iimeyile ezivela 2010 kwaye 2012 cebisa ukuba i-IFIC ixhomekeke kwiqela elincinci lezenzululwazi ezinxulumene nomzi-mveliso ukujongana nezifundo eziphakamisa iinkxalabo malunga nee-GMO. Kuzo zombini ii-imeyile, uBruce Chassy, ​​unjingalwazi weYunivesithi yaseIllinois ifumene iimali ezingachazwanga ezivela eMonsanto ukukhuthaza nokukhusela ii-GMOs, icebisa i-IFIC ngendlela yokuphendula kwizifundo eziphakamisa inkxalabo malunga nee-GMO.
Isigqeba seDuPont sicebisa ngesicwangciso-qhinga sokumelana neengxelo zabaThengi
Kwi NgoFebruwari 3, 2013 imeyile, Abasebenzi be-IFIC baxwayisa "iqela lobudlelwane beendaba" ukuba iiNgxelo zabaThengi zixela ukukhathazeka malunga nokhuseleko kunye nefuthe lokusingqongileyo kwe-GMOs. UDoyle Karr, Umlawuli womgaqo-nkqubo we-biotechnology kunye nosekela mongameli webhodi ye Iziko lokuDibana kokutya, wathumela i-imeyile kwisazinzulu esinombuzo ngeengcebiso zempendulo, saze saphakamisa ukujongana neeNgxelo zabaThengi ngeliqhinga: “Mhlawumbi yenza ileta eya kumhleli otyikitywe ngoososayensi abali-1,000 XNUMX abangadibaniyo neenkampani zembewu ye-biotech echaza ukuba bayayikhupha. kunye (neeNgxelo zabaThengi ') malunga nokhuseleko nempembelelo kokusingqongileyo. ?? "
Ezinye iinkonzo ze-PR IFIC ibonelela ngomzi mveliso
Ukusasaza amanqaku athetha ishishini elahlekisayo: Aprili 25, 2012 imeyile kumalungu ali-130 oMfelandawonye ukondla ikamva “egameni lelungu loMbutho Umbutho wabavelisi bokutya ” ibango lokuba iphulo lokuvota laseCalifornia lokufaka ukutya kwimveliso yemfuza "lingavimbela ukuthengiswa kwamashumi amawaka eemveliso zokutya eCalifornia ngaphandle kokuba zineelebheli ezikhethekileyo."
Ukujamelana neencwadi ezigxeka ukutya okucutshungulwayo: A Februwari 20, 2013 I-imeyile ichaza isicwangciso-qhinga se-IFIC sokujikeleza iincwadi ezimbini ezigxeka ishishini lokutya, "Ityuwa, iSwekile, Amafutha" nguMichael Moss, kunye ne "Pandora's Lunchbox" kaMelanie Warner. Izicwangciso zibandakanya ukubhala uphononongo lweencwadi, ukusasaza iindawo zokuthetha kunye "nokuphonononga ezinye iindlela zokongeza ukubandakanyeka kumajelo eendaba edijithali ngokomlinganiso wobungakanani boshicilelo." Kwi-imeyile kaFebruwari 22, 2013, isigqeba se-IFIC safikelela kwizifundiswa ezintathu- URoger Clemens weDyunivesithi yaseMzantsi California, UMario Ferruzzi weYunivesithi yasePurdue kwaye UJoanne Slavin weYunivesithi yaseMinnesota -Ukubacela ukuba babekho kudliwanondlebe lweendaba malunga neencwadi. I-imeyile inike abafundi izishwankathelo zezi ncwadi zimbini kunye namanqaku okuthetha e-IFIC ekhusela ukutya okwenziweyo. “Siza kuyivuyela into yokuba nisabelana ngazo naziphi na iingongoma ezithile malunga nemiba ethile yesayensi ephakanyiswe ezincwadini,” itsho i-imeyile evela kuMarianne Smith Edge, usekela-mongameli omkhulu we-IFIC kwezesondlo nokhuselo lokutya.
Uphando kunye nophando ukuxhasa izikhundla zeshishini; Umzekelo wovavanyo luka-2012 olwafumanisa ukuba abathengi abangama-76% “abanakucinga ngayo nantoni na eyongezelelweyo abangathanda ukuyibona kwileyibhile leyo” esetyenziswa ngamaqela oshishino ukuchasa iilebheli ze-GMO.
“Sukuba nexhala, sithembe” iincwadana zokuthengisa, njenge Le Ukuchaza ukuba izongezo zokutya kunye nemibala akukho nto inokukhathazeka ngayo. Imichiza kunye nedayi "zidlale indima ebalulekileyo ekunciphiseni ukuswela ukutya okunesondlo phakathi kwabathengi," ngokutsho kwencwadana ye-IFIC Foundation "eyayilungiselelwe phantsi kwesivumelwano sokusebenzisana ne-US Food and Drug Administration."
Uqeqesho lomyalezo kumaqela oqeqesho, njengale 2015 Inkqubo yoqeqesho kumagqirha ezonyango malunga nendlela yokukhuthaza ii-GMO.
iposwe kuqala ngoMeyi 31, 2018 kwaye ihlaziywa ngoFebruwari 2020
Ukutya kwengqondo, Izifo ezinxulumene nokutya, GMO, Uphando lwethu, Pesticides, Abangcamli Umdibaniso wokondla ikamva, Umbutho we-American Beverage Association, Ibhunga laseMelika lezeNzululwazi kunye neMpilo, Umbutho weSayensi yeNyama yaseMelika, Inkampani yeArcher Daniels Midland, Bayer, Isityalo seBayer, UBruce Chassy, IBhunga loLawulo lweCalori, iinkxalabo zomhlaza, Cargill, Iziko lokuDibana kokutya, Coca Cola, ConAgra, Dannon, Dow, DowDuPont, UDoyle Karr, dupont, Jikelele iMills, Inethiwekhi yokuSebenza kweMandla yeHlabathi, glyphosate, Umbutho wabavelisi bokutya, Hershey, IARC, IFIC, Isiseko se-IFIC, UJames Hill, UJoanne Slavin, UJohn Sievenpiper, Kellogg, Kraft Foods, UMario Ferruzzi, mars, UMat Raymond, McDonalds, IMonsanto, Nestle, PepsiCo, Iifama eziqhubekayo, URoger Clemens, Ulondolozo lwendalo, Ukuqonda inyathelo lethu lokutya, Unilever, ISebe Lezolimo lase-US